Kupfeka sei tutu - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Kupfeka sei tutu
Kupfeka sei tutu
1.Kupfeka sei tutu
Iwo mateki haana kuunyana-asina kujeka, leggings anopa makumbo chiremerera, kutwasuka; Yakasungwa-yakarukwa, jasi rinonakidza, rakakoshwa-refu, refu-refu tambo orshirt ichaita kuti mutambi ataridzike sekunge akapfeka uye akagadzirira kutamba. Rudzi rwecollar runogona kutoita kuti mutsipa uratidzike kupfupika kana kureba.
Poloshirts, semuenzaniso, ane makorari anoita kuti avo vane akakwirira kana akapamhama mapapiro vatarisike, uye zvinogona kuita kuti iye akapfeka anzwe kusagadzikana mukutamba kweamateur. Yakapoteredzwa denderedzwa siketi inogona zvakare kuva nenjodzi kune yakazara chiuno, uye zvisina kunaka qualityruffles ndivo vane mhosva.
Sezvineiwo, hapana chinhu chiri kukuvadza mutsara wemuviri wemutambi, kwete iyo isiriyo vara, kusunungura maoko kana masiketi.
2. Chii chinonzi ballet
Ballet, yeEuropean echinyakare dhanzi, akave nemimba muItaly Renaissance nguva. Muhafu yechipiri yezana ramakore rechi17, yakatanga kukura uye kuva inozivikanwa muFrance uye zvishoma nezvishoma yakava nyanzvi. Yakave yakakurumbira pasirese panguva yekuenderera kwekuvandudza. Ballet ndiyo useof mimhanzi, matambiro ekutamba kuita chinoshamisa chirongwa.
Ballet akaberekwa muItari, akaberekerwa mudare reFrance reLouis XIV mukunopera kwezana ramakore rechi17, akagoneswa muFrance muzana ramakore rechi18, ndokupinda munguva yayo yakabudirira muRussia pakupera kwezana ramakore rechi19.
Chimiro chekutamba padanho, yeEuropean classic class, inowanzozivikanwa seasballet. Iyo tsika yechinyakare yekutamba yeEurope ine zvimiro zvakaomarara uye zvimiro zvechimiro, zvinoenderana nekutamba kwevanhu kutenderedza Europe uye kwakaumbwa mushure memazana emakore ekuenderera mberi kwekugadzirisa, kuvandudza nekusimudzira. Mushure mezana ramakore rechi19, chakakosha tekinoroji ndechekuti vatambi vakatamba nemazano ezvigunwe zvavo mune dzakashongedzwa shangu, saka yainziwo kutamba kwakanakisa.
Yapfuura:Kudzidza ballet kunokanganisa sei muviri wako?
Tevere:Ballet inogadzira mamiriro akanaka